Google Home App ho an'ny PC - Sintomy amin'ny Windows 10 & Mac - App
Ahoana ny fampiasana ny Google Home App amin'ny PC?
Amin'ny hazakazaka serivisy an-trano an-trano, Google dia nitondra fanampim-panazavana miavaka amin'ny Google Home. Sehatra iray ahafahanao mampifandray ireo fitaovanao Google Home sy Chromecast amin'ny fotoana iray. Azonao atao ny mifehy ny fitaovana marani-tsaina toa ny jiro, Wifi, ary ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny fanamorana ny Google Home App.
Google Home dia misy amin'ny Android SY iOS . Na izany aza, tsy misy kinova azo alaina ho an'ny sehatra PC izay azo antoka fa mametra ny fahafahany. Mbola azonao atao ny mampiasa ny browser Chrome hidirana amin'ny Chromecast hahafeno ny fepetra takinao. Ankoatr'izay dia mila miantehitra amin'ny Chromecast amin'ny serivisy hafa ianao.
Topimaso amin'ny tranokala Google:
Google Home dia mitovy amin'ny serivisy an-trano marani-tsaina toa an'i Alexa's Echo. Na izany aza, miasa toy ny foibe tokana izy io hanambarana ireo fitaovanao tohana rehetra. Amin'ny teny tsotra, raha manana fitaovana marani-tsaina ianao toa ny jiro, mpankafy, mpandahateny, fampisehoana, fahitalavitra, ary maro hafa, azonao ampifandraisina amin'ny Google Home izany.
Mazava ho azy fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny takian'ny Google Home izy ireo, izay tsy be loatra. Amin'ny alàlan'ny Google Home, afaka mamorona tamba-jotra an-trano mifampitohy mifandraika ianao. Tsy mila mividy Google Nest na fitaovana hafa koa ianao. Ny sisa ataonao dia ny misintona ny fampiharana amin'ny Android anao ary manomboka mampifandray ireo fitaovana mifanentana.
Vakio ihany koa: 10+ Serivisy fandefasana fahitalavitra tsara indrindra
Midika izany fa azonao atao avy eo ny mampiasa ny smartphone-nao na ny fitaovana hafa miaraka amin'ny app Google Home hifehezana ny tranonao nefa tsy misy olana tanteraka. Azonao atao koa ny mampiasa ny mpanampy ny feon'ny Google hiditra amin'ny rojom-baiko ary hiasa miaraka amin'izay rehetra hitanao fa mety.
Ankoatr'izay, amin'ny fotoana iray ihany, azonao atao ny miditra amin'ireo mailakao sy maro hafa. Google Home dia ahafahanao manana efijery mandefa fotoana mora kokoa ho an'ny mozika, horonan-tsary na fampisehoana avy amin'ny Display na fitaovana iray mankany amin'ny iray hafa. Ohatra, raha mandefa YouTube amin'ny tranokala fitehirizam-bokin'ny PC ianao dia afaka misafidy ny safidinao ary mifandraisa amin'ireo mpandahateny Google Home Speaker mifanaraka aminy mba hanapoahana ny mozika ao an-tranonao.
Amin'ny ankapobeny, tambajotra mangarahara amin'ny fitaovana rehetra izy io mba hahamora ny fidirana nefa tsy mandany fotoana be loatra amin'ny fametrahana, fidirana ary ny fitakiana mitovy aminy.
Afaka miditra amin'ny tranokala Google amin'ny alàlan'ny PC ve ianao?
Misy fomba iray hidirana amin'ny Google Home amin'ny alàlan'ny PC, dia ny fametrahana emulator Android. Tsy fomba tsy ara-dalàna izany. Noho izany, azonao atao ny misintona premium na fenitra Android Emulator amin'ny PC-nao ary midira ao an-trano Google avy any.
Izy io dia hanome alalana ny fampisehoana feno an'ny fampiharana Google Home izay hita amin'ny sehatra hafa. Na izany aza, mety voafetra ao amin'ny Google Assistant izy io satria hiasa eo ambanin'ny emulator amin'ny tsara indrindra ary tsy hampiasa ny PC-nao ho anao.
Raha tsy izany, azonao atao ny mianatra mampiasa ny baiko amin'ny alàlan'ny fiasan'ny 'cast' an'ny browser mba hahazoana fidirana tsara kokoa. Na izany aza, tsy mendrika ny ezaka izany.
IOS Emulator tsara indrindra ho an'ny PC (2020)
Ahoana ny fampiasana Alexa App amin'ny PC?
Ny fanamorana ny Google Chrome:
Ny tranokala Google Chrome dia mitondra anao hiditra amin'ireo endri-javatra voafetra ao amin'ny solo'ny Chrome ao amin'ny PC. Ho an'ity dia mila ny kinova chrome farany ianao, ary ireo fitaovana fandefasana chrome Wifi hafa ihany no mifandray.
Raha mampiasa ny safidin'i Google chrome's cast ianao dia afaka mandeha amin'ny fitaovana Chromecast hafa. Na izany aza, tsy azonao fehezina ny tranon'ny Google. Toy izany koa, tsy azonao atao ny manampy, manamboatra na manova ny fitaovana rehetra ao amin'ny Google Home. Noho izany, mamepetra be.
Manampy ve ny Voice Assistant?
Ny fametrahana Google Assistant ao amin'ny PC-nao dia tsy hahafahanao miditra amin'ny serivisy Google Home. Azo antoka fa manamora ny fizotry ny fampiasana ny PC-nao, saingy tsy hitondra fotoana fialam-boly betsaka ao aminao ao amin'ny Google Home izany. Mitovy amin'ny safidin'ny mpilalao Chrome, azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny Google Voice Assistant. Na izany aza, izany ihany no azonao atao amin'izany.
Amin'ny ankapobeny, ny safidy tsara indrindra ho anao dia ny fampiasana emulator Android amin'ny PC ary hametraka Google Home hiditra amin'ireo fitaovana avy any.
Ahoana ny fampiasana ny Chrome Browser?
Araho ireto dingana tsotra ireto handefasana na inona na inona amin'ny browser Chrome anao amin'ny fitaovana Google Home:
Ao amin'ny Chrome, sokafy ny menio izay ampiasainao ho an'ny takelaka vaovao na hahazoana ny fikirana
Ao amin'io menio io dia hahita safidy ‘cast’ ianao
Tsindrio fotsiny ilay izy, dia hanomboka hikaroka fitaovana izy io
Raha vao hitany ilay fitaovana dia azonao atao ny mampifandray sy mandefa ny atiny mivantana amin'ilay fitaovana
Tadidio fa ny fitaovana roa dia mila mifandray amin'ny Wifi iray ihany.
Inona ny safidy tsara indrindra hampiasana ny Google Home amin'ny PC?
Araka ny voalaza etsy ambony, ny Android Emulator toa ny BlueStacks no safidy tsara indrindra hampiasana ny Google Home amin'ny alàlan'ny PC-nao. Na eo aza izany dia mety hahita olana ara-pifandraisana ianao. Mety tsy hisy mihitsy safidy Google Home ho an'ny PC toa tsy mbola be ny fampiharana Google ho an'ny PC amin'ny ankapobeny.
Hanampy amin'ny fampiasana Google Home amin'ny PC ve ny Chromecast?
Chromecast dia fitaovana voafintina sy avo lenta izay mamadika ny fahitalavitra mahazatra anao na ny seho monitor ho fahitalavitra manan-tsaina hidirana amin'ny fialamboly. Afaka mifandray amin'ny app Google Home ny Chromecast anao, saingy tsy hiasa ho tetezana mampifandray ny PC amin'ny Google Home ianao.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Display dia hiasa ho ampahany amin'ny fitaovan'ny Google Home. Ankoatr'izay, ny PC, ny endriny, ny fisie ary ny zavatra hafa rehetra dia mbola tsy azo aleha ihany. Noho izany, tsy afaka manampy anao hanana endrika fifandraisana rehetra ny Chromecast. Tsy misy fomba azo tsapain-tanana hialana azy koa.
Tsara kokoa ny manaiky ny Google Home App amin'ny maha-izy azy, foibe handaminana ireo fitaovanao maranitra mifanaraka amin'ny Google. Ergo, ny PC-nao dia sehatra iray hafa tanteraka miaraka amin'ny rafitra Operating sy fitakiana tsy manam-paharoa.
Ny safidin'i Chrome safidy no tsara indrindra antenainao hahazoana idiran'ny Google Home App. Na izany aza, raha manapa-kevitra ny hampiasa Emulator ianao dia hitombo ny mety. Izany no fomba tsara indrindra hanaovana izany. Ny sisa ataonao dia ny misintona ny emulator, avy eo ny Google Home app, ary ampiasao toa ny fampiasanao azy amin'ny fitaovana Android.
Tsy azo antoka ny ho avy, ary Google dia mety hamoaka zavatra mahasoa ho an'ireo mpampiasa hampifandray ny PC-ny. Hatramin'izay, ireo no fomba tsara indrindra sy ara-dalàna hampiasainao amin'ny Google Home App for PC.
Kik Messenger amin'ny PC
Ahoana ny fomba ahazoana afo maivana amin'ny PC?
Hellblade 2: Senua's Saga Developer dia nilaza fa ny lalao voalohany dia ho toy ny lalao indie amin'ny tohiny ho avy!
Ny vanim-potoanan'ny mpitsikera: 1 fifangaroan'ny hatsikana, esoeso ary hehy
apetraho ao amin'ny pc ny Alexa
ahoana ny fanafoanana ny fitsarana maimaimpoana yidio
ny fomba hahazoana karatra fanomezana 50 dolara amazon maimaimpoana
ny fomba fanilihana ny maody azo antoka tumblr tsy misy kaonty
toerana tsara indrindra handefasana anime
tranonkala hijerena sarimihetsika nefa tsy misoratra anarana